Zvigadzirwa Vagadziri - China Zvigadzirwa Vatengesi, Fekitori
2,4-Dinitrochlorobenzene (DNCB) chinhu chinogadzirwa nefomula (O2N) 2C6H3Cl. Iyo yeyellow solid iyo inosungunuka mune organic manyungudiki. Iyo yakakosha yepakati kugadzirwa kwemaindasitiri kwemamwe makomponi.
Chitarisiko Yellow kristaro, upfu, soluble mu ethanol, zvishoma soluble mumvura. Zvinhu Indices Kuoma Wet Chitarisiko Powder Crystal Purity% -98.0 -80.0 Melting poindi ℃ -138.0 -138.0 Insolubles muHCl% -0.1 -0.0.1 Zvishandiso Zvekugadzira dhayi nemishonga yepakati. Inonyanya kushandiswa muasidhi brown RH, acid yakasvibirira 3G, nhema BL, BRL, BGL. Kurongedza Masaga eFibre mukati-akapakatira nehombodo, 25kg mambure yega yega. Yakagadziriswa kurongedza inotaurika.
Chitarisiko Bright-nhema dema kana zviyo. Insoluble mumvura uye doro. Soluble mune sodium sulfide mhinduro segirini-nhema dema. Zvinhu Indices Shade Zvakafanana neyakajairwa Simba 200 Hunyoro,% -6.0 Nyaya dzisingapindike mumhinduro yesodium sulfide,% -0.3 Zvishandiso Zvinonyanya kushandiswa kudhaya pane donje, viscose, vinylon uye bepa. Kuchengetedza Kunofanira kuchengetwa pakaoma uye nemhepo. Dzivirira kubva kuzuva rakananga, hunyoro uye kupisa. Kurongedza Fiber mabhegi emukati-akapetwa neplasti ...
Nhema ndeimwe yemumvuri wepamusoro wevhoriyamu yakashongedzwa nekotoni & synthetic machira machira ane nguva yese kudiwa kukuru kunyanya kwekusakara kupfeka (madhimoni nehembe). Pakati pekirasi dzese dzedyestuffs, Sarufa sarurusi inokosha kirasi yedhayi yemuvara we cellulosics, kuvapo kweanoda kusvika zana ramakore.
Iko kunaka kwekutsanya zvivakwa, kudhura mashandiro & kunyevenuka kwekushandisa pasi peakasiyana mamiriro ekugadzirisa mamiriro, kupera-kuenderera uye kuenderera kunoita kuti ive imwe yeanonyanyo kufarirwa dyestuffs. Kupfuurirazve, sarudzo yakafara yesarudzo yemhando dzakasiyana dzakajairika, leuco uye fomu yakanyungudika ndicho chinhu chikuru chinopa kuhupenyu huripo & kusingaperi kuri kuwedzera kudiwa kweiyi kirasi yedhiestuff.
Liquid dhayi mafomu anobatsira ekuendesa kara mune rako application. Izvi zvinobvisa dhayi kutsvaira guruva kana kuita mitambo panguva yekugadzirisa zvigadzirwa zvako, pamwe nekuve nyore uye zvinowanzo chengeteka kushanda nazvo. Aya madhayi haatore nguva kana kuedza kuwana yakanakisa-yakazara-dhiza dhayi jira.